January 2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Kyaw Ba Thit January 31, 2014 at 7:27pm
မလိုအပ်ဘဲ ခဏခဏ အမောက်ထောင်မပြပါနဲ့....။
Aunt Bwe Hein (အံ့ဖွယ်ဟိန်း)
ဂဏန်း ဆိုတဲ့ အမျိုးဟာ သူတို့ ကိုယ်တိုင်သာ အပေါ်မရောက်ဘဲ ရှိမယ် - "ဆွဲချ" နေရာမှာ အင်မတန် သန်ကြတယ်။"
ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ လူတစ်ယောက် ဂဏန်းတွေ လိုက်ကောက်နေတယ်။ ကောက်သမျှ ဂဏန်းကောင်တွေ ကို ပလိုင်းတစ်ခုထဲ ထည့်ထည့် ယူတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ ပလိုင်းမှာ အဖုံး အပိတ် မပါဘူး။ ဖွင့်ရက်သားကြီးပဲ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအလှကို ဂရုစိုက်သင့်တယ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိကြတဲ့ လူသားတိုင်း ကျန်းမာခြင်းနဲ့ အတူ လှပခြင်းကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြမှာ အမှန် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေလှလိုက်တာ၊ ဆံပင်ကောင်းလိုက်တာ၊ သွားလေးတွေက ပုလဲလေးတွေ စီထားတဲ့အတိုင်း ညီညာလိုက်တာ စသည် ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြမှာပါပဲ။ ဒီလိုအလှတရားတွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အတွက် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းလေ့ ရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့် လိုက်ရအောင် .....
Myanmar Youth Media Club 29 Jan 2014
MYMC - MYMHOT
Table Settings & Dining Cultures
Posted: 29 Jan 2014 07:10 PM PST
ထမင်းစားခန်းထဲမှာ ထမင်းပွဲ၊ ဟင်းပွဲ တည်ခင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စားတာ သောက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သိထားရမယ့် အချက် လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ထမင်းစားခန်း အတွင်း မှတ်သားထား စရာများကို ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
Ko Thein Lwin shared လွင်သန္တာစိုး's photo.
"ကလေးငယ်ကို ဆေးတိုက်လိုက်ရင် အဖျားက ကျသွားပေမယ့် ပြီးရင် ပြန်တက် လာတာပဲ ဆရာ"လို့ ကလေးမိဘအ တော်များများက ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒါအမှန်ပါပဲ၊ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေမှာပဲ။ ကလေးကို ပါရာစီတမောတိုက်ရင် ဆေး ရဲ့ အာနိသင်က ငါးနာရီ၊ ခြောက်နာရီ လောက်ပဲ ခံပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ကုန်သွားရင် အဖျားက ပြန်တက်လာပါ တယ်။
Author: lubo601 | 12:31 PM | No မှတ်ချက် |
မြိတ်မြို့၊ မြိတ်တောင်နယ်မြေ၌ အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်ပြီး ဈေးဆိုင်အား မီးရှို့မှု ဖြစ်ပွား
ပဌာန်းအောင်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သံဃာတော်များ ဘောလုံးကန်ရာမှ ရွာသားများနှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သမီးရဲ့ သရက်ခြံအတွက် ဒေသခံလယ်မြေတွေ သိမ်းယူ (ရုပ်/သံ)
ဘယ်သူ့မှ စောက်ဂရုမစိုက်တဲ့ ပုဆိုးလှန်ပြမယ့် ဗိုဟ်ချုပ်အုန်းမြင့်ရဲ့ ဇာတ်ကြမ်း (ရုပ်/သံ)
နိုင်ငံရေးသမား ထောင်ကျမည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောစကား ထောင်ကျခံဝံ့ဟု ဦးဝင်းတင်ပြော
တပ်မတော်သားများ လွှတ်တော်တွင်း ရှိနေခြင်းက အသွင်ကူးပြောင်းရေး အပေါ် နိုင်ငံတကာ ယုံကြည်မှု ကျဆင်းနိုင်ဟုဆို
YoYarLay · 144,469 like this
42 minutes ago · Edited ·
မြန်မာပြည်မှာ Entrepreneur တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူတိုင်း ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲ အချို့ ကို တင်ပြပေးလိုက် ရပါတယ်။
၂၁ ရာစု ကာလနာ သုတ်
၁၊ ငါ၏စတေ့တပ် ဖတ်မိရုံမျှ
Posted by Forum Moderator3on January 30, 2014 at 16:13 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များ၏ မပြီးဆုံးသေးသောခရီးကြမ်း
(ခင်မေဇော် - 7Day News Journal ပါဆောင်းပါး)
"တံတားအောက်မှာနေတာကို ရဲက မနေရဘူးလို့ လာပြောတော့ ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ အိမ်တန်းလျားထဲမှာ ၀င်ခိုနေတယ်။ အဲဒီမှာ တခြားလူတွေလည်း ခိုနေကြတယ်။ အဲဒီထဲကတယောက်က ကျနော့်ဖုန်းချာဂျာ ခိုးတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီလူနဲ့ရန်ဖြစ် ရိုက်ကြတော့ ရဲကရောက်လာတယ်လေ။
အဆင့် ၁။ အရူးအမူးဖြစ်ကြတဲ့ အဆင့် *
ဒါကတော့ချစ်သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ ပထမဦးဆုံး အဆင့်ပါ။
ဒီအဆင့်မှာ ချစ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြစ်မမြင်ကြဘဲ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကောင်းကွက်တွေပဲ ကွက်မြင်ကြတဲ့ အဆင့်ပေါ့။
အဆင့် ၂။ နားလည်မှုရလာတဲ့ အဆင့်* *
တစ်ယောက်ပိုသိလာကြပြီ။ ညဘက်တွေဆို ချစ်သူနဲ့ ဖုန်းတွေအကြာကြီးပြောမယ်။ မိသားစုအကြောင်းတွေ၊ ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းတွေ၊ လျို့ဝှက်ချက်တွေ အကုန်ပြောမယ်။
ပြီးရင် ချစ်သူဆီကလာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတိုင်းက
ကိုယ့်အတွက် ချိုမြိန်နေမယ်။ ပျော်ရွင်စရာအချိန်လေးတွေပေါ့။
“ရွှေမန်းမေ / ခင်ယုမေ”
Soe Min October 4, 2010 at 4:31am
ဒီတခါတော့ သီချင်းမြူးမြူးလေး ရွေးထားပါတယ်။ ရွှေမန်းမေ တဲ့။ ဆရာရွှေပြည်အေးရဲ့ လက်ရာ အံတီမေ ရဲ့ ငယ်မူငယ်သွေး အသံလေးကြားရပါမယ်။ ချိုပြုံး တို့ ခင်ယုမေ တို့ ဆိုတာ ရေဒီယိုမှာ တော်တော် နံမည်ကျော်ပြီးမှ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဖြစ်လာကြတာပါ။
ချောလိုက်ကြတာလည်း မှုန်လို့။ အဲဒီခေတ်က ဖက်ရှင် တပတ်လျှိုထုံးလေးမှာ ပန်းပွင့် ကြီးကြီးတွေပန်လို့။ အင်မတန် ယဉ်ပါပေတယ်။ မင်းသမီးမဖြစ်ခင် အဆိုတော်ဘ၀က ဓါတ်ပုံတွေက ပိုလှနေသယောင် ရှိပါတယ်။ ငယ်ငယ်နုနုလေးတွေကိုး။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နဲ့ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် ဖြစ်ခဲ့သူတွေပါ။
ရွှေမန်းမေသီချင်းကတော့ မြန်မာ့မီးရထားက ရထားအသစ်ကြီးတွေ ၀ယ်ပြီး ဒဂုံမေ ရွှေမန်းမေ အမည်တွေနဲ့ ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်ရထား စဆွဲတုန်းက ရထားပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေဖို့ စပ်ပေးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ မန်းရာပြည့်ပွဲအမီလား သေချာတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ နောက်ခံတီးလုံး တွေနားထောင် ကြည့်ရင် အဲဒီခေတ်က အေ၀မ်းထွက်ရုပ်ရှင် တော်တော်များများမှာ ပါတဲ့ ကာလပေါ် တီးကွက်ဆန်းတွေကို သတိပြုမိမှာပါ။ ဆရာရွှေပြည်အေး အေ၀မ်းခင်မောင် တို့ဟာ အေ၀မ်း ကုမ္ပဏီရဲ့ ပင်တိုင် ဂီတမှူးများကိုး။
Myanmar Youth Media Club 28 Jan 2014
Posted: 28 Jan 2014 05:28 PM PST
လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ ရယ်လို့ မရှိ သေးခင် အလုပ်သင် ဘ၀မှာ တွေ့ကြုံ နိုင်တဲ့ မမျှော်လင့် ထားတဲ့ အခက် အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှု တွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်း ကြမလဲ။
လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ ရယ်လို့ မရှိ သေးခင် အလုပ်သင်ကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ မရည်ရွယ် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။
စစ်တပ်တိုင်း ရှေ့ကဦးဆောင်တိုက်ရတဲ့ ပြည်သိမ်းတပ်တွေနဲ့ နယ်မြေထိန်းရတဲ့တပ် တွေဆိုပြီးခွဲခြားထား ကြတယ်။စစ်ဖြစ်ရင် အရင်ဆုံးရှေ့ကထွက်တိုက်ရတာက ပြည်သိမ်းတပ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးတပ် တွေပဲ။ ဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံဟာ အီရတ်ကို(၂)ခါဝင်သိမ်းရတယ်။ ဒီလိုဝင်သိမ်းရင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ် တွေနဲ့ဝင်သိမ်းတာပဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံကကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် တိုက်ခိုက်မှုလိုအပ် ချက် အပေါ်မူတည်ပြီး တပ်မတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဥပမာ ရှေ့တန်းရန်သူ့နယ်မြေကို အလျှင်အမြန်ဝင် သိမ်း တော့မယ်ဆိုရင် တင့်ကားတွေမပါတဲ့ပေါ့ပါးတဲ့ 82 Light Airborne Division ကိုသုံးပြီး၊တင့်ကား တွေ၊ အားမတ်ကားတွေ ပါတဲ့ တပ်မတွေကနောက်မှ ၀င်နေရာယူရမယ်။
တင်ပါးနှင့် ပေါင်လုံး ကြီးခြင်းသည် ဗိုက်ပူခြင်း ထက်စာလျှင် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွား စေသော ကိုယ်လက်စထရော အမျိုးအစားကို လျော့နည်းစေပြီး သွေးလွှတ်ကြော နံရံများ မာကြောမှုကို ကာကွယ် ပေးသည့် ကျန်းမာ ရေးအတွက် ကောင်းသော ကိုယ်လက် စထရော အမျိုးအစား ကို မြင့်တက် စေကြောင်း လေ့လာချက်အသစ်များအရသိရသည်။
Author: lubo601 | 6:15 PM | No မှတ်ချက် |
လားရှိုးမြို့ နယ် တရားရုံးတွင် အမှုမှလွတ်မြောက်လာသူအား တရားလိုဘက်မှ အဓမ္မခေါ်ဆောင်မှုဖြစ်ပွား
အခြေခံဥပဒေပြင်ရေးမှာ ပွင်လင်းဖို့ ဗြိတိန်ဒုဝန်ကြီး တိုက်တွန်း
ဆက်သွယ်ရေး လေလံအောင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို လိုင်စင်ထုတ်ပေး
မည်သည့်နိုင်ငံရေး သမားကိုမှ ဂရုစိုက်စရာမလို အစိုးရကို
၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ
7Day News Journal · 536,003 like this
ဧရာဝတီမြစ်ရေက အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ စီးဆင်းနေသည်။ မြစ်ကမ်းစပ်အထက်နားတွင်တော့ ကျိုးတိုးကျဲတဲ တည်ဆောက်ထားသော တဲအိမ်စုလေးများက ဆိတ်ငြိမ်စွာတည်ရှိနေသည်။ သို့သော် တဲအိမ်လေးတွေရဲ့ရှေ့မှာ၊ ဘေးမှာ၊ တဲပေါက်ဝမှာ ရှိနေတဲ့လူများ၏ မျက်လုံးတွေ ကတော့ ဂနာမငြိမ်ဘဲတစ်စုံတစ်ရာကို မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့် စောင့်မျှော်နေကာ ဧရာဝတီမြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးကို ငေးမောနေကြသည်။
"ဗိုလ်၊ ကျား၊ သေနတ်"
'ငါနဲ့ မတည့်တဲ့လူကို ခေါ်ရင်၊ မင်းကို မခေါ်တော့ဘူး'... ဆိုတဲ့ စကားဟာ ကျနော်တို့ငယ်ငယ် ကလေးဘဝတုန်းကပဲ ပြောခဲ့ကြတယ် မှတ်နေတာ...
ခု အရွယ်ရောက်ပြီး၊ လူလားမြောက်ပြီးသူ တချို့လည်း ပြောနေ၊ ကျင့်ကြံနေကြဆဲဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အလှအပကို ဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ ရင်သားကျန်းမာရေး
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ကြည့်ကောင်း တယ်လို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ အခါမှာလည်း ရင်သား အလှဟာ ပါဝင် ပတ်သက် နေပါတယ်။ ရင်သားလှတဲ့ မိန်းကလေး တွေဟာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိနေတတ် ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေး တစ်ယောက်အတွက် ရင်သားအလှ မထိခိုက် စေဖို့နဲ့ ရင်သား ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေစေဖို့အတွက် သိထားသင့်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မျက်စိရှေ့တွေ့တာ ကောက်ပြီး ဘာသာပြန်လိုက်တာပါ၊
By Thanlay Ko
ကျေးညိုလေးကျောင်းက ပြန်လာတာ ချွေးသံရဲရဲနဲ့ မောကြီးပန်းကြီးဖြစ်နေတော့ သူ့အဖေက မေးတယ်... ...
"ဘယ်လို ဖြစ်လာတာလဲ သား"
"ကျောင်းကနေအိမ်ထိ ဘတ်စ်ကားနောက်က ပြေးလိုက်လာခဲ့လို့ ဖေဖေ"
Pen ဖရန့်နှင့် မန္တလေးသိန်းဇော်
သူများတွေ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေပြီးရင် စပီကင်တွေ တက်ကြ ကွန်ပူတာတွေ တက်ကြနဲ့ပေါ့။ဦးကျော်စွာဝင်းက LCCI ဆိုတာ ဘာပါ...ခင်ညာလို့ ကြော်ငြာပြီး သင်တန်းဂျီးလာဖွင့်တော့ တက်စရာက တစ်ခုထပ်တိုး လာပြန်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေက သင်တန်းပေါင်းစုံနဲ့ မအားကြပါဘူး။
by ‪#‎ပိုပိုဇော်‬(သဘာဝအားအင်)January 25, 2014 at 11:44am
မင်းဒင်ရဲ့သက်ခိုင်(၂) ။ အခန်း(၁၄)
ကိုအမ်းစထရောင်းမောင်းနေတဲ့ကားပေါ်မှာ အငြိမ့်သားလိုက်ပါနေတဲ့ ကျနော်ဟာ မမျှော်လင့်ပဲ သူ့အဖေ မစ္စတာဖီးလစ်(ရှမ်းနာမည် ဦးစိုင်းလတ်)အကြောင်းကိုလည်း နားထောင်ခဲ့ရသေးဗျ။ ကိုအမ်စထရောင်းရဲ့မျက်နှာရုပ်သွင်ကိုကြည့်ရင်း ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ အတွေးတစ်ခု ပေါ်မိတယ်။
Kyar Phyu Nwe was tagged in Ko Zaw Nyi Nyi's photo.
ဘုရားဘုရား အချစ်ဆိုပါလား။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာကို ဘယ်တုန်းကမှ မစဉ်းစားခဲ့တာ သေချာသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ထံမှ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းဟာ ကျွန်မ အတွက် မြောက်များစွာသော စိတ်လှုပ်ရှားမှု့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှထင်မဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ကျွန်မဟာ အပျိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအလှကို ဂရုစိုက်သင...
လွယ်ကူလေ့လာသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (Uncount nouns and proper...
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များ၏ မပြီးဆုံးသေးသောခရ...
Facebook နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ဝေဖန် သုံ...
Myanmar Youth Media Club 26 Jan 2014
Myanmar Youth Media Club 25 Jan 2014
"ပေါက်ကရ ရမ်းဘာသာပြန်ထားသော ဟာသများ"
ကျွန်မဘယ်လို လုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူး ..
ကင်ဆာရာဂါကို နှစ် ၃၀ နီးပါး ရင်ဆိုင်အံတုခဲ့တဲ့ ခင်...
MyanmarCelebrity.Com Daily Posts 25 Jan 2014
မနက်စာအဖြစ် ဘာကြောင့် ကြက်ဥကို စားသင့်ပါသလဲ
“စကားတက္ကသိုလ် / ခင်ယုမေ”
Myanmar Youth Media Club 24 Jan 2014
“မန်းနေပြည် / ခင်ယုမေ”
Facebook Backup လုပ်နည်း
" အပျင်းပြေ _ ၉ " ( What about Muzic _ 1 )
Finland နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်
Myanmar Youth Media Club 23 Jan 2014
** "We are the men"- ငါတို့လည်း လူတွေပါ ***
ဒီလိုမှန်းသိရင် မိန်းမ ဆယ်ယောက်ယူပါတယ်ကွာ
ထမင်းကို အာဟာရ ရှိအောင်ဘယ်လိုစားမလဲ
Taxi မောင်းသူတစ်ဦးထံမှရတဲ့ အသိပညာတစ်ခု
Myanmar Youth Media Club 22 Jan 2014
အိပ်စက်ချိန် မခြွေတာသင့်သည့် အကြောင်းရင်း (၁၀) ခု
တစ်နေ့တာ ပိုမို အဆင်ပြေလာစေမည့် နည်းလမ်း (၁၀)မျိုး
ဒေ၀ါနန်း မိတ်ဆက် (အပိုင်း-၁)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးကရက်စက်ရုံသစ် ဖွင့်ခွင့်မပြု
Myanmar Youth Media Club 21 Jan 2014
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းေ...
အမေ (သို့မဟုတ်) အဖြူရောင် သမုဒယ ကြိုးလေးများ၏ သခင်